Agaasimaha cusub ee isbitalka Madiina oo munaasabad soo dhaweyn ah loo sameeyey+sawirro. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Agaasimaha cusub ee isbitalka Madiina oo munaasabad soo dhaweyn ah loo sameeyey+sawirro.
Agaasimaha cusub ee isbitalka Madiina oo munaasabad soo dhaweyn ah loo sameeyey+sawirro.
Munaasabad lagu dhiirogelinayay laguna soo dhaweynayay maamulka cusub ee dhawaan loo magacabay isbitalka Madiina ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Waxaa ka qeybgalay xafladda mas’uuliyiin,ganacsato iyo arday kuwaasi oo wax ka soo bartay dalka Shiinaha,iyadoo Dr Haashim Maxamed Faarax agaasimaha cusub ee soo dhaweynta loo sameeyey uu kamid yahay bahda reer China.
Dhamaan mas’uuliyiintii ka hadlay gobtaasi ayaa agaasimaha cusub ku dhiirogeliyay gudashada waajibaadka loo igmaday oo ah u adeegista shacabka,waxaana kamid ah Hodan Cismaan Cabdi oo kaaliye ka ah jaamacadda Zhejian normal University ee dalka Shiinaha,Dr Najiib Ciise Diiriye oo ka socday Jaamacadda Simad,ganacsato iyo dhaqaatiir kale.
Dr Haashim Maxamed Faarax agaasimaha cusub ee isbitalka Madiina ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen bahdiisa,wuxuuna muujiyay sidi uu diyaarka ugu yahay in bulshadiisa uu u adeego.
Agaasimaha cusub ee isbitaalka Madiina Dr. Hashim Farah ayaa 5 August 2020 xilka kala wareegay agaasimihii hore ee isbitaalka Dr Maxamed Yuusuf oo in muddo ah soo maamulayay isbitalkaasi. Xil wareejintan waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha hoggaanka caafimadka ciidmadda Booliska Soomaaliya Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) iyo mas’uuliyiin kale.
Previous articleWarmurtiyeed laga soo saaray shirkii Wasaaradaha Maaliyadda DF iyo Dowlad goboleedyada.
Next articleMaalinta dhalinyarada Adduunka oo lagu xusay Jowhar.[Sawirro]